Iyi iri nyore waya digital vanhu vanopokana iyo inogona kutumira kunze data kuburikidza ne USB, Mazhinji edu digital vanhu vanopokanazviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yedudigital vanhu kuverenga.
Masayendisiti manejimendi emusika wemazuva ano anovimba nedatha kuti utaure. Dhata rakaringana rinobvumidza vanoshandisa kuti vabate ruzivo rwakakwana uye dhata munguva yekutanga, uye vanogona kuita akanakisa bhizinesi matekiniki nemaitiro panguva yekutanga. Saka kana iwe uchida kuwana chaiyo data, iwe unoda chaiyo uye yakavimbika digital vanhu vanopokana, iyo inogona kuenderera mberi, chaiyo-nguva uye kunyatso kuverenga huwandu hwevapfuuri kuyerera uye yakazara yevatakurwi kuyerera dhata yemusuwo wega uye kubuda kwemusika, uye zvinonyatsoratidza shanduko yemupfuuri kuyerera. muitiro. HPC005Udigital vanhu vanopokanainyanzvi vanhu kuverenga muchina. Iyo inogona kunyatso kuverenga huwandu hwevapfuuri vanopinda nekusiya zvitoro zuva rega rega, uye inogona kuiswa nyore nyore kumakomputa kuitira ongororo yedata uye mhinduro. Iko kuisirwa kuri nyore uye kuri nyore kusangana neakasiyana magadzirirwo zvinodiwa zvevatengi.
Nei Uchisarudza HPC005U vanhu veadhijitari vanopesana?
1. Kuronga zvebhizinesi: Zvinoenderana nenzvimbo, nguva nenzvimbo, kuongororwa kwehuwandu hwevapfuuri kuyerera uye kuenzanisa kwedhata inoenderana kunogona kubvumidza mabhizinesi kugadzirisa kuronga bhizinesi.
2. Kushanda kwekushanda: Kusakanganiswa kwevatakuri vanoyerera manhamba mukati mezuva rese, uye kuongororwa kwedata kunoita kuti mashandiro echitoro ave nyore uye akajeka.
3. Kushambadzira zviitiko: Kuburikidza nehuwandu hwe digital vanhu vanopokana, iyo nguva uye bhajeti yezvekushambadzira zviitiko zvinogona kunyatso kuongororwa, uye kusimudzira kwezvigadzirwa kunogona zvakare kuitwa nenzira kwayo.
4. Kukwidziridzwa kwekudyara: Kufamba kwevanofamba kunozivisa kukosha, uye marongero uye rendi yemashopu inogona kudzorwa zvine mutsindo kuburikidza nekufamba kwechokwadi kwevanofamba, izvo zvinogona kukwezva vatengesi vazhinji kuti vagare mukati.
Zvimiro zveMRB HPC005U digital vanhu pakaunda
1. Wedzera iyo LCD inoratidzira skrini, iyo data mukati uye kunze iri pachena nekukanda.
2. HPC005U digital vanhu vanopokana inoenderana neyakagadzika musuo upamhi hwe1-40 metres, uye daro rakafara.
3. Yakakura-inokwana 3.6V lithium bhatiri, hwakareba hupenyu hwebhatiri, hupenyu hwebhatiri hunogona kusvika 1.5 makore, zvakajairika kushanda voltage 1.5-3.6V, uchishandisa AA (Nha. 5), inogadziriswa, bhatiri rinogona zvakare kushanda zvakajairika.
4. HPC005U digital vanhu vanopokana inogona kugadzirisa zvirinani kukanganisa kwekuverenga kunokonzerwa neshanduko yemwenje, uye yakasimba kupokana nekupindirwa kwechiedza.
5. Iko kugona kushanda kwekugona kwegirazi rinopinza kunowedzera.
6. HPC005 digital vanhu vanopokana inogona kutumira kunze data kuburikidza ne USB tambo.
7. Chitarisiko dhizaini yekambani nyowani yakapfupika uye nerupo, uye inotsigira kunamatira kana kumisikidza kuiswa.
8. Iyo yepamusoro inogona kuve yakasarudzika dhizaini kana kuwedzera LOGO kusangana zvakasiyana zvinodiwa nevatengi.
9.Iyo infrared mwenje weHPC005U digital vanhu vanopokanayakavharirwa nevanhu kana zvinhu kweanopfuura masekondi mashanu, iyo LED iri pakati peRX ichapenya, chidzitiro chepafudzi chinoratidza maitiro akavharika, zvichikurudzira kubvisa ichivharira, uye iyo inogamuchira data ichaudzwa kune software. kurekodha.
Magetsi 1.5v / 3.6v AA kana lithium bhatiri kune ma sensors; Adapter / USB inogadzirirwa DC
Divi 2.5 x 2.3 x 0.98 "
Uchishandisa Tembiricha -10 ~ 40 ℃
Ruvara Yakachena, kana Yakasarudzika
Kuiswa Mhando dzese dzezvitoro, raibhurari, Museum, Chipatara, Chikoro
Inoshanda Ino Yekugamuchira (RX) 180μA
Yakasimba State Yazvino Yekugamuchira (RX) 70μA
Inoshanda Ino Yekutakura (TX) 200μA
Kunofambira mberi State Razvino Rinofambisa (TX) 80μA
Kutsvaga Nzira Infrared mwaranzi
Kuverenga Nzira Yakananga Shot uye Shade uyezve Verenga
Dhata Rinofambisa Nguva Maminitsi mashanu kubva kuRX kuenda kuDC - yakagadzirirwa; Pakarepo - DC kune software
RF Kufambisa Kakawanda 433MHz, Yakanyorwa
Kubatanidza Nzira RX kuenda DC neRF Transmission, DC kukombuta ne USB tambo;
Yakazvimirira software Yechitoro chemasaini, pamusoro windows windows
Network software Kune zvitoro zvemaketani, pamusoro windows windows uye SQL2005 zvinoshanda.
Kureba 1.2meter, vakatarisana
Wide ≤20 mamita
Yakagadziriswa Nzira Screws kana Stickers
Range kubva kuSensors kuenda kuDC ≤40 mamita
Tine mhando dzakawanda dze IR digital vanhu vanopokana, 2D, 3D, AI digital vanhu vanopokana, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo digital vanhu vanopokana zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
MRB wireless digital vanhu vanopokana HPC005 vhidhiyo
Pashure: MRB wifi tsoka inopesana HPC015S
Zvadaro: MRB isina waya Vanhu vanopokana HPC005
Michini Beam Counter
Infrared Vanhu Kupikisa
MRB yekutengesa traffic counter yevatengesi vanhu co ...